Qiimaha Hubka Muqdisho oo markale sare u kacay iyo lacagaha lakala siisto. | Warbaahinta Ayaamaha
Qiimaha Hubka Muqdisho oo markale sare u kacay iyo lacagaha lakala siisto.
Hub lasoo galiyey Muqdisho
MUQDISHO-AYAAMAHA-Xog uruurin lagu sameeyay suuqyada hubka ee Muqdisho waxaa ku cad in qoryaha qaar uu qiimahoodu kordhay 100% sideeddii bil ee ugu dambeysay, taasi oo muujineysa sida dhaqdhaqaaqu yahay.
Mid ka mid ah kuwa hubka iibiya oo magaciisa C. M. aan kusoo koobeyno sababo amni waxaa uu leeyahay “Waxaa batay qoryaha la iibsanayo, siyaasiyiin iyo dad caadiya waa naga iibsadaan, diyaar-garow ayaa jira, ma ogin”. Mar aan weydiinay goorta ay qiimaha kordheen “April markii dagaalka dhacay kadib waae” ayuu kusoo gabagabeeyey.
AK47 nooca Kuuriyanka halkii uu ka ahaa $800 hadda suuqa waxaa uu ka joogaa $1,100.